Foto e sere na igbe kaadiboodu | Crafts Na
Foto e dere na kaadiboodu igbe
Claudi ego | | Ọrụ katọn, Nzughari
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ aka na ihe eji emegharị emegharị na ihe dị mfe ịme, nke a agaghị efu na nchịkọta gị! Taa Aga m egosi gị otu esi eserese foto, jiri ihe eji emegharị emegharị nke enwere ike ịchọta n'ụlọ. Ezigbo iji kpoo foto gị, ihe okike, nyefee, ma ọ bụ ojiji ịchọrọ inye ya.
Kaadiboodu (ọkacha mma na ọkụ agba)
Bee igbe ọka na ọkara, site n'otu n'ime ihu ya. Hapụ ihu dị na mpụga, hapụ ihu ihu n'ime.
Maka akụkụ nke etiti (ihu a na-ekewaghị ekewa nke igbe), tụọ obosara n'etiti akụkụ ya, na Chọpụta otu square na nnukwu akara.
Malite ịcha na nkuku nke square na ị dọtara. Ruo mgbe ịhapụ 4 nku anya buru ibu.
Na 4 nnukwu nku anya edozi, see ahịrị yiri nke square nwere otu oke akara. Nke mbụ dị gịrịgịrị (ọ ga-abụ ọkpụrụkpụ nke etiti ahụ), nke abụọ kachasị ike (ọ ga-abụ obosara nke etiti ahụ), na nke atọ ị nwere okpukpu abụọ karịa nke mbụ.
Bido apịaji niile na taabụ tinyere ahịrị na ị dọtara. N'ebe ndị ọzọ na-abụghị.
Bee nkuku ya na nkpuru osisi, ka hapu ya na onodu nke iri abuo n’ise mara ogidi.
Bee otu square site na kaadị, ma rapara ya na okpuru kaadiboodu. Etinyekwala gluu, ma ọ bụrụ na ọ bụ mmanya, kpachara anya ka ị ghara ịtọpụ mpempe ọ bụla nwere ike deform ya.
N'ikpeazụ, gluo nku anya. Iji mee nke a, gbanye ngwụcha nku anya na ọkara, ma tinye gluu n'akụkụ mpụta nke ị hapụrụ, rue mgbe ha niile ga-esonye.
Atụrụ m anya na ọrụ a masịrị gị! Cheta na inwere ike ichota otutu na peeji a, echefukwala ịdenye aha iji nweta oru aka niile emere!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Nzughari » Foto e dere na kaadiboodu igbe
Originalzọ mbụ iji nye ego
Home humidifier na ndị ọzọ na usoro-eme ka iru mmiri n'ụlọ